नाच्दा नाच्दै भुईँमा बजारिएर नर्तकीको वक्षस्थल फुटेपछि… जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
नाच्दा नाच्दै भुईँमा बजारिएर नर्तकीको वक्षस्थल फुटेपछि…
निकै उत्तेजक पोल डान्स गर्ने एक नर्तकी युवतीको नाच्ने क्रममा एउटा वक्षस्थल नै पडि्कएर फुट्यो अनि उनलाई तत्कालै अस्पतालमा लग्नुपर्यो ।
घटना भेनेजुयलाको हो । पोल डान्सर मोडेल डियोसा क्यानेल्सले हालै पोल डान्स देखाइरहेको बेलामा नियन्त्रण गुमाई पोलबाट फुत्किएर भुइँमा बजारिन पुगिन् । उनी भुइँमा पछारिँदा घोप्टो परेकी थिइन् जसका कारण उनको छातिको भाग भुइँमा नराम्रोसँग थचारियो । त्यो दुर्घटनाले २८ वर्षकी नर्तकीको वक्षस्थल नै फुट्न पुग्यो र उनलाई तत्कालै आकस्मि शल्यक्रिया नै गर्नुपर्यो ।
प्लेब्वाय मोडेल समेत रहेकी क्यानेल्सका वक्षस्थल कति कमजोर रहेछन् जुन मान्छे भुइँमा थचारिँदा प्वाट्टै फुट्ने ? भन्ने सोँच्नुहोला । वास्तवमा ती सक्कली नभएर प्रत्यारोपण गरी आकार बढाइएका वक्षस्थल रहेछन् । त्यसैले उनको छाति भुइँमा बजारिँदा उनको एउटा सिलिकन भरिएको वक्षस्थल फुट्न पुग्यो र उनलाई तत्कालै अस्पताल लगेर पुनः शल्यक्रिया गरी वक्षस्थललाई पूरानै अवस्थामा ल्याइयो ।
उनले अस्पतालको बेडबाटै आफ्ना फ्यानका लागि इन्स्टाग्राममार्फत तस्वीर सहितको सन्देश लेखेकी छिन् । जसमा उनले लेखेकी छिन्, ‘मेरा पि्रयजनहरु, हिजो मेरो आकस्मिक शल्यक्रिया भयो । पोल डान्सको अभ्यास गरिरहेको बेला म खसेँ र मेरो कृत्रिम वक्षस्थल फुट्यो ।’ साथै उनले आफु छिटै ठीक हुने भन्दै चिन्ता नगर्न समेत आग्रह गरेकी छिन् ।